F1: MILA FANORENANA FANOMPOANA FAMONJENA ve aho?
-> Any ivelan'i Shina ve ianao nefa avy any Shina?
-> Mila fanampiana amin'ny fifandraisana amin'ireo mpanamboatra sinoa ve ianao?
-> Sorena ve ianao amin'ny raharaha sy fanajariana entana?
-> mitady serivisy mora vidy ve ianao?
-> Te hampitombo ny volanao 10 ka hatramin'ny 10 000 isam-bolana ve ianao?
Raha eny, dia ny Sunsonexpress Fulfillment no vahaolana hendry ho anao.
F2: Oviana no fotoana mety hanatanterahana ny famoahana ny baiko?
Tsy maninona ianao dia orinasa vao manomboka na orinasa matotra, raha hitanao fa diso fanantenana ianao amin'ny raharaha ao an-trano fitehirizana, ny vidin'ny trano fitehirizana (ao anatin'izany ny vidin'ny asa ary koa ny fanofana), indrindra rehefa miasa mafy mandritra ny tontolo andro ny mpiasao nefa mbola miverina ihany. baiko, ary ankoatr'izay dia tsy manam-potoana hifantohana amin'ny varotra ataonao ianao, avy eo tonga ny fotoana hahatsapanao fa mety mila mamoaka ny fahatanterahan'ny baiko ianao ary mifantoka bebe kokoa amin'ny zava-dehibe indrindra - orinasa. Ny outsourcing ny fanatanterahana ny baiko dia fanapahan-kevitra stratejika izay misy dikany amin'ny fitomboan'ny orinasa. Isaky ny mihoatra ny zavatra hainao ny volanao, dia mifandraisa azafady Sunsone mampiseho Fahatanterahan'ny zavatra ilaina ary resaho ny fomba ahafahanay manampy anao amin'ny fampiroboroboana ny orinasanao sy ny lazanao. Manana traikefa manan-karena amin'ny fivarotana e-varotra miampita sisintany izahay ary koa logistics izay afaka manampy ny orinasanao amin'ny sehatra manaraka.
F3: Ahoana ny fomba hisafidianana ny orinasam-panatanterahana marina?
Rehefa mitady hivoaka any ivelany ireo serivisy fanatanterahana anao ianao dia mila mandinika ireto antony ireto:
Firafitry ny vidiny: Diniho izay karazana entana (refy, lanja, sokajy vokatra sns) izay amidinao ary inona ny teti-bolanao fanatanterahana satria mila mandoa sarany miorina amin'ny habe sy ny lanjan'ny entana alefa ianao. Ary tokony ho fantatrao ihany koa ny vidiny amin'ny fitehirizana ny lisitra sy ny fakana ary ny fanangonana entana. Misy sarany miafina sy fifanarahana maharitra sns.
Safidy fandefasana: Raha mivarotra iraisam-pirenena ianao dia mila mahazo antoka raha afaka mandefa iraisam-pirenena ilay orinasa manatanteraka.
Toerana fanatobiana entana: zahao raha eo amin'ny faritra "havanana" ny ivotoerana fanatanterahana satria mila angonin'ny orinasa fanatanterahana ny tahirinao na nalefan'ny mpanamboatra miaraka amin'ny vidiny mirary. Raha toa ka eo akaikin'ny seranam-piaramanidina ny toerana fitobiana dia tombony lehibe izany handaminana ny fandefasana haingana ireo mpanjifa farany.
Fanohanana ho an'ny mpanjifa: Rehefa misy zavatra tsy mandeha mandritra ny fizarana, ny fanatanterahana ary ny fandefasana entana, dia te hiresaka amin'ny olona iray ianao ary hampiasa fanampiana, io no serivisy fototra tokony homena. Ary koa, raha afaka manome ny serivisy aorinan'ny varotra ny orinasa mpanatanteraka (ohatra ny baiko fanarahana) amin'ny anaranao dia izany no tombony lehibe azonao ahazoana serivisy maimaim-poana.
Fampidirina: Satria mampiasa mpamatsy antoko fahatelo ianao, zahao fotsiny raha efa tafiditra na tsy tafiditra ao anatin'ny rafitra misy anao toa ny tranokalao, tsena toa an'i Amazon, ERP, na sehatra hafa ny rafitr'izy ireo. Tokony ho tsara koa izany raha toa ka mamela fahitana feno amin'ny fanaraha-maso ny lisitra sy ny fanatanterahana ny dingana amin'ny fotoana rehetra sy amin'ny toerana rehetra.
Ireo lafin-javatra rehetra etsy ambony ireo dia ampahany amin'ny serivisy omen'ny Sunsone expression omena.
F4: Azoko atao ve ny mamaly ny fampahalalana momba ny kaontiko mandritra ny fotoana tena izy amin'ny WEB?
Eny. Ny rafitra Sunsoneorot dia mamela ny mpampiasa rehetra fampahalalana amin'ny fotoana tena 24/7 ary koa ny fifehezana tanteraka ny fitantanana ny lisitra sy ny filaminana.
F5: Inona no karazana serivisy azonao omena?
Manolotra serivisy isan-karazany izahay ary mino fa afaka manome fahafaham-po ny fitakianay samihafa amin'ny rojom-panomezana.
1. Ny serivisy fanatanterahana ny trano fivarotana dia misy ny fandraisana, fitahirizana, fakana entana ary fonosana.
2. Serivisy fandefasana eran-tany avy any Shina amin'ny alàlan'ny serivisy paositra, serivisy lehibe iraisam-pirenena Express, tsipika fanoloran-tena natokana ho an'ny tena, làlan'ny fandefasana FBA, serivisy fandefasana entana, fandefasana rivotra, serivisy fitaterana an-dranomasina.
3.Ny fanampiana amin'ny alàlan'ny sambo dia misy famerenana indray, fanamafisana, fametahana marika, fivoriambe, sns.
4. Serivisy fanampiny: kitting, marika, fampidirana tranokala.
5.Products sourcing sy fividianana.
6. Agent fandoavana ny entanao.
F6: Azo antoka ve ny trano fanatobiana antsika? Manome fiantohana amin'ny vokatra ao amin'ny trano fanatobiana entana ve izahay?
Noho ny entana be dia be eo am-pitandremana na eo am-pitandremana antsika dia tsy afaka mamoy izany isika.
Ny trano fanatobiana entana dia manana rafitra fanakanana afo ary koa fanaraha-maso 24 ora sy fidirana voafehy mba hiantohana ny fiarovana ny vokatrao. Ireo mpiasan'ny trano fanatobiana entana efa za-draharaha dia nametraka dinganà famonosana mirindra mba hisorohana ny entana tsy ho very na simba mandritra ny fizotran'ny fikirakirana. Amin'ny tranga tsy fahita firy amin'ny zavatra very na simba, ny vokatrao dia miantoka fiantohana hatrany amin'ny sandan'ny vokatra. Ny saram-piantohana dia 0,1% amin'ny "Vidin'ny vokatra" (tena vidiny) amin'ny vokatrao isan-taona.
F7 ： azonao ekena ve ny fandefasana entana mora tohina?
Eny, azontsika atao ny manaiky ny fandefasana bateria, ranoka, kosmetika, vovoka, sns.
F8 ： Ahoana no fomba andoavako ny saram-pandefasana na fiampangana serivisy hafa? Tokony aloako mialoha ve ireo sarany ireo?
Eny, mila mandoa mialoha ireo sarany ireo ianao. Azonao atao ny mandoa vola aminay amin'ny alàlan'ny fandefasana vola, famindrana banky, famindrana tariby, carte de crédit, PayPal sns .Raha mahazo ny fandoavanao, ny kaontinao miaraka aminay dia homena vola mitovy amin'izany ihany. Avy eo, hampihena vola avy amin'ny kaontinao ho azy izahay isaky ny mandefa fonosana ho anao izahay na manome serivisy ho anao. Mba hisorohana ny fahatarana amin'ny fandefasana sy ny serivisy dia anjaranao ny miantoka fa misy vola ampy ao amin'ny kaontinao. Azonao atao ny miditra amin'ny rafitray hijerena ny antsipirian'ny fifanakalozana sy ny fifandanjan'ny kaontinao.
F9 ： Azonao atao ve ny manampy ahy hividy amin'ireo mpivarotra sinoa?
Fantatray fa ny mpivarotra sinoa sasany dia tsy manaiky fandoavam-bola avy any ivelany. Afaka manome serivisy "mpivarotra manokana" i Sunsoneorot, afaka manafatra sy mandoa anao.
Fantatray koa fa ny mpivarotra sinoa sasany dia tsy mandefa entana any ivelan'i Sina. Afaka manome serivisy fandefasana entana ho an'ny tena mividinao amin'ny tranokala sinoa i Sunsoneorot. Mifandraisa aminay amin'ny alàlan'ny mailaka: Andy@sunsonexpress.com
Q10 ： Atambatra fonosana marobe sy alefa ho fonosana iray?
Manolotra serivisy fanamafisana i Sunsoneorot. Raha mividy amin'ny mpamatsy isan-karazany ianao dia azontsika atao ny miandry ny fahatongavan'izy rehetra avy eo alefa ao anaty boaty iray.
Q11 ： Ahoana ny fandoavana?
Tsy mandefa faktiora izahay ary avy eo miandry ny fandoavanao vola. Mampiasa rafitra mialoha. Azonao atao ny mampiditra vola ao amin'ny kaontinao Sunsoneailoa ary hamafana avy hatrany ny sarany avy amin'ny kaontinao ny rafitray. Azonao atao ny manamarina ny fifanakalozana ara-bola rehetra rehefa miditra amin'ny User Center izahay. Ny ambiny sisa amin'ny kaontinao dia hampiasaina amin'ny fifanakalozana ho avy. Anjaranao ny miantoka vola ampy hisorohana ny fanelingelenana ny serivisy. Azonao atao ny mameno ny kaontinao amin'ny alàlan'ny PayPal. Mba handefasana soa aman-tsara ny fandoavam-bola,
Misy fomba roa handoavana sarany / ampio ny kaontinao:
Famindrana 1.Bank: tsidiho azafady ny ID-n'ny Sunsoneflur anao rehefa top-up amin'ny alàlan'ny Bank Transfer ianao, hahafahanay mamantatra ny fandoavam-bolanao sy manome ny trosany ny kaontinao mifanaraka amin'izany.
Kaonty 2.PayPal: Azafady apetraho amin'ny alàlan'ny rafitray ny vola. Ny rafitray dia hampandoa ny kaontinao amin'ny RMB amin'ny vola raisina. Azafady, mariho fa ny saram-pitantanana fiampangana PayPal rehefa mandefa vola aminay ianao. Ho fanampin'izany, hofoaninay ny saram-pifanakalozana vola 2,5% ho an'ny vola vahiny rehetra afa-tsy ny HKD.
3.Payoneer. Azafady mba apetraho mivantana amin'ny alàlan'ny rafitray ny vola.
1. Izahay dia hampandoa ny kaontinao araka ny tena voarainay. Amin'ny ankapobeny dia io no vola nalefanao nihena ny saram-pandraharahana PayPal.
2. Raha mandefa USD ianao, dia avadinay ho RMB izany ary hatoky ny kaontinao izahay.